U Mobile - Myanmar
ငွေကြိုပေးလိုင်းကသာ 10 apps အတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်ကို ပေးပါတယ်။
imo, Viber, WeChat နဲ့ တခြားအရာတွေအတွက် အကန့်အသတ်မဲ့အင်တာနက်ကို ရယူပြီး သင်ချစ်ရသူများနဲ့ အဆက်သွယ်မပြတ် နေထိုင်ပါ။
Facebook, Instagram နဲ့ Twitter တို့ကို အကန့်အသတ်မဲ့သုံးပြီး အိမ်မှာရှိတဲ့ သင့်မိတ်ဆွေ မိသားစုများနဲ့ အမြဲဆက်သွယ်နေပါ။
imo, Viber, Facebook Messenger နဲ့ Whatsapp တို့ကို အကန့်အသတ်မဲ့သုံးပြီး ကိစ္စ ကြီးကြီး ငယ်ငယ် လက်မလွတ်ပါစေနဲ့။
U Mobile နံပါတ်များကို RM1/တစ်ရက် နှုန်းဖြင့် မလေးရှားမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို တစ်နေကုန် တစ်ညလုံး အကန့်အသတ်မဲ့ ဖုန်းခေါ်ပါ။
10 APPS အတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာ
RM1 အကန့်အသတ်မဲ့ ဖုန်းခေါ်ခြင်း
U Mobile နံပါတ်များသို့
လစဉ် အခြေခံအင်တာနက်ကို 1GB အခမဲ့သုံးခွင့်
200MB မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာ
RM6 ကြိုဖြည့်ထားသော ခရက်ဒစ်
2X ပိုမြန်တဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာအတွက် GX30 ကိုသုံးပါ။
ခေါ်ဆိုရန် 1310 95 <ဒေသကုဒ်> <ဖုန်းနံပါတ်>
ရယူပျော်ရွှင်ဖို့ တစ်ပတ်လျှင် RM15 ငွေဖြည့်ပါ -
• အပတ်စဉ် အခမဲ့ IDD ခေါ်ခြင်း- မြန်မာသို့ 10 မိနစ် အပိုဆို IDD (တစ်လ 40 မိနစ်)။
• ရယူသည်မှ3ရက်အတွင်း အခမဲ့ IDD ခေါ်ခြင်းနှင့် YouTube အကန့်အသတ်မဲ့။
• အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ YouTube (နံနက်2- နံနက်10)
သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများ ပါဝင်ပြီး။
အကန့်အသတ်မဲ့ FUNZ သို့ မြှင့်ခြင်း!
သင့်ရဲ့ ငွေကြိုပေး ဖုန်းအင်တာနက်ကို 2X ဆ ပိုမြန်လိုက်ပါ။
အင်တာနက်နဲ့ ဖုန်းခေါ်ချိန် အများကြီး ထည့်ပေးထားလို့ အိမ်အဝေးရောက်နေတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Apps အားလုံး & သုံးစွဲမှုများ
ရယူရန် *118*1*1*3# သို့ ခေါ်ပါ
ရယူရန် *118*1*1*1# သို့ ခေါ်ပါ
ရယူရန် *118*1*1*2# သို့ ခေါ်ပါ
အတွက် အင်တာနက် 3GB
U MOBILE ဖွငျ့ GOOGLE PLAY STORE တှငျ ငှခေပြေါ
သငျ့အကွိုကျ apps တှအေတှကျ ပိုကောငျးတဲ့အတှအေ့ကွုံကို ရယူပါ
အခုဆို U Mobile သုံးပွီး သငျ သညျ IMO, Bigo Live, PUBG နှငျ့ အခွား apps တှအေတှကျ ငှပေေးဝယျနိုငျပါပွီ.
ရိုးရှငျးတဲ့ အဆငျ့3ခုကို လုပျဆောငျရုံပါဘဲ-
ဝယျမညျ့ app သို့မဟုတျ တဈခုခုကို ရှေးပါ
ငှပေေးခမြေညျ့နညျးလမျးတှငျ U Mobile ကိုရှေးပါ
BUY ကိုနှိပျပါ၊ ဒါဆို ရသှားပါပွီ!
10GB မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာ 14 ရက် အတွက် RM5.
ရယူရန် *181*2*3# ကို နှိပ်ပါ။
*ဟော့စပေါ့တ်၊ ဝိုင်ဖိုင်စက်ဖြင့်သုံးခြင်းအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
*Data Booster5ကို GX38 နှင့် GX30 အတွက်သာ ရနိုင်ပါသည်။
"Booster 5" ကိုရွေးပြီး RM5 ပေးပါ။
"Booster" ကိုရွေးပြီး RM10 ပေးပါ။
*118*3*9*3# ကို ခေါ်ပါ
ဖုန်းဘေလ်မျှဝေရန် နောက်သို့ ပင်မ
*118*3*3# ကို ခေါ်ပါ
12 (မြန်မာ) ကို ရွေးပါ
လက်ခံရယူမည့်သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ:
လက်ခံရယူမည့်သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ
MMK300 = RM15
MMK5000 = RM24
1,2ကို နှိပ်ပါ
သင်သည် 95912345678 သို့ MMK3000 ပို့နေပါပြီ။ သင်၏ U Mobile ခရက်ဒစ်မှ RM15 ဖြတ်သွားပါလိမ့်မည်။
I. U Mobile ငွေကြိုပေး အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါသည်
II. IAT သုံးစွဲမှုကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် အသုံးပြုသူတွင် ခရက်ဒစ် အနည်းဆုံး RM5 ရှိနေရပါမည်။ ဥပမာ- RM4 ဖိုး
သုံးစွဲလိုပါက သင့်တွင် အနည်းဆုံး RM9 ရှိနေရပါမည်။
MyUMobile App ဖြင့် သင့်အကောင့်ကို စီမံပါ!
ငွေကြိုပေး GX12/ GX30 - မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ - ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များ Unlimited Funz Prepaid Plan - မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
GX12 နှင့် GX30 ဆိုတာ ဘာလဲ?
GX12 နှင့် GX30 တို့သည် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် အင်တာနက်သုံးရန် လျှောက်ထားရသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ GX12 နှင့် GX30 တို့သည်7ရက် နှင့် 30 ရက် သက်တမ်း ရှိကြပါသည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးရန် သင်၏ ငွေကြိုပေး ဖုန်းလိုင်းသည် အသက်ဝင်နေရပါမည်။ GX12 တွင် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာနှင့် ကွန်ယက် အားလုံး သို့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဖုန်းခေါ်ခြင်းအပြင် အခမဲ့ 1GB ဟော့စပေါ့အင်တာနက် ပါဝင်ပါသည်။ GX30 တွင် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာနှင့် အခမဲ့ 3GB ဟော့စပေါ့အင်တာနက် ပါဝင်ပါသည်။
သင်သည် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာ (3mbps) ကို သင့်ဖုန်းတွင် အကုန် သုံးနိုင်ပါသည် (ဥပမာ- ဝဘ်ဆိုက်ဝင်ခြင်း၊ ဆိုရှယ်၊ ဗီဒီယို၊ Twitch နှင့် Joox, Spotify, Apple Music စသည့် တေးဂီတ အွန်လိုင်းနာဆင်ခြင်း၊ အီးမေးလ်နှင့် အခြားအရာများစွာ)။
GX12 ရှိ အကန့်အသတ်မဲ့ ခေါ်ဆိုမှုများကို ဘာအတွက် သုံးနိုင်ပါသနည်း?
အကန့်အသတ်မဲ့ ခေးဆိုမှုများကို ပြည်တွင်းခေါ် အားလုံး နှင့် မိုဘိုင်းလိုင်း အားလုံး အတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။
GX12 အကန့်အသတ်မဲ့ ခေါ်ဆိုခြင်းကို ပြည်ပခေါ်ရန် သုံးနိုင်ပါသလား?
မသုံးနိုင်ပါ။ အကန့်အသတ်မဲ့ ခေါ်ဆိုမှု အားလုံးကို ပြည်တွင်းသာ သုံးနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန် IDD နှုန်းများနှင့် ပြည်ပအသုံးပြုမှုများ ကျသင့်ပါမည်။
GX12/ GX30 ကို မည်သူတို့ သုံးနိုင်သနည်း?
ယခုဝန်ဆောင်မှုကို U Broadband သုံးသူများမှအပ U Mobile သုံးစွဲသူတိုင်း သုံးနိုင်ပါသည်။
GX12/ GX30 ကို မည်သည့်စက်များတွင် သုံးနိုင်သနည်း?
GX12/ GX30 ကို စမတ်ဖုန်းများအတွက်သာ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့မှ တစ်ဆင့် အခြားစက်များသို့ မျှဝေခွင့် ရှိပါသလား?
အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာသည် သင့်စမတ်ဖုန်းတွင် တစ်ကိုယ်ရည် သုံးရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားစက်များသို့ ပြန်လည်မျှဝေရန် မြန်မှုန်းကန့်သတ်မထားသော ထပ်ဆောင်း မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ကို အခမဲ့ ပေးထားပါသည်-
GX12 အတွက် 1GB နှင့်
GX30 အတွက် 3GB
မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့တွင် သုံးစွဲမှု အားလုံးအတွက် ယခုကိုယ်တာထဲမှ ဖြတ်သွားပါမည်။.
ကျွန်ုပ်၏ မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ ကိုယ်တာ ကုန်သွားပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း?
သင်သည် မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ကို မြန်နှုန်းလျော့ 64kbps အထိဖြင့် ဆက်သုံးနိုင်ပါမည်။
GX12/ GX30 ကို မည်သို့ စတင်သုံးရမည်နည်း?
အဆင့် 1 – MyUMobile app ကို ဖွင့်ပါ
အဆင့်2– Add-Ons ကို ရွေးပါ
အဆင့်3– GX12/ GX30 ကို ရွေးပါ
အဆင့် 1 - *118*1# ကို ခေါ်ပါ
အဆင့်2– GX12/ GX30 လျှောက်ထားခြင်းကို အတည်ပြုပါ
28118 သို့ ON GX12 သို့မဟုတ် ON GX30 ဟု SMS ပို့ပါ
GX12 နှင့် GX30 ကို လျှောက်ထားပြီး စတင်သုံးနိုင်ရန် သင့်တွင် RM12 နှင့် RM30 ငွေလက်ကျန် အသီးသီးရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
ယခုအစီအစဉ် သက်တမ်းမှာ မည်မျှနည်း? လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အသစ်ပြန်ယူခြင်းကာလကို မည်သို့ တွက်ချက်ရမည်နည်း?
လျှောက်ထားခြင်းကို စတင်သုံးသည့်နေ့ရက်မှ ရေတွက်ပြီး အသစ်ပြန်ယူခြင်းကို GX12 နှင့် GX30 တို့အတွက်7ရက် နှင် 30 ရက် အကြာတို့တွင် အလိုအလျောက် ပြုလုပ်ပါမည် (သင့်ငွေကြိုပေး အကောင့်ထဲရှိ ငွေလက်ကျန်အပေါ် မူတည်ပါသည်)
GX12/ GX30 ကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မယူမီ သက်တမ်းကုန်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်ထံ SMS နှင့် သတိပေးမည်လား?
ဟုတ်ကဲ့။ သက်တမ်းမကုန်မီ2ရက် နှင့် 1 ရက် အလိုတွင် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် သတိပေး SMS ပို့ပြီး၊ အသစ်ပြန်လျောက်ပြီးပါက SMS နောက်တစ်စောင် ပို့ပါမည်။
ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်ကို မည်သို့ ရယူမည်နည်း?
အဆင့်3– MB စာရင်းမှ တစ်ဆင့် နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်ကို ရွေးပါ
အဆင့် 1 - *118*2*1# ကို ခေါ်ပါ
အဆင့်2– MB-Day Plan အတွက် 1 ကို ရွေးပါ
28118 သို့ <On MBDay> ဟု SMS ပို့ပါ။
စတင်သုံးခြင်း အထမြောက်စေရန် သင့်တွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်ရှိပါစေ။ ဥပမာ- MB-Day စသုံးရန် RM5 လိုပါသည်။
နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များသည် သက်တမ်းကုန်သွားပါက အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ MB-Day မှအပ သက်တမ်းကုန်ပါက အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူပါသည်၊ သင့်အကောင့်တွင် ရယူရန် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန် ရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သုံးစွဲမှု သက်တမ်းမကုန်မီတွင် အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူရန် SMS သတိပေးချက် ရရှိမည်လား?
ဟုတ်ပါတယ်။ သက်တမ်းမကုန်မီတွင် အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူရန် SMS ရပါလ်ိမ့်မည်။ အသစ်ပြန်ယူပြီးပါက နောက်ထပ် SMS ထပ်ရပါမည်။
သုံးစွဲစဉ် ကာလတစ်လျှောက် ကျွန်ုပ်၏ သုံးစွဲမှုအပေါ် သတိပေးချက် ပြုပါမည်လား?
ဟုတ်ပါသည်၊ သုံးစွဲစဉ် ကာလတစ်လျှောက် သင့်ထံ SMS သတိပေးချက်များ ပို့ပြီး ဝဘ်ဆိုက်လင့်များလည်း ပို့ပါမည်၊ ဥပမာ သင့်ကိုယ်တာ ကုန်ဆုံးခါနီးချိန် သို့မဟုတ် အသစ်ပြန်ယူရန် လိုအပ်ချိန်တွင်။
နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ် ရယူရန် အနည်းဆုံး ခရက်ဒစ် လိုအပ်ချက်မှာ မည်မျှနည်း?
သင်အလိုရှိသော အစီအစဉ်ကို ရယူရန် သင့်တွင် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေ ရှိရပါမည်။ ဥပမာ MB-Day ကို ရယူရန် သင့်လက်ကျန်တွင် RM5 ထက် ပိုရှိနေရပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏ ဒေတာအသုံးပြုမှုကို မည်သို့ စစ်မည်နည်း?
အဆင့်2– ‘USAGE BALANCE’ သို့ သွားပါ
အဆင့်3- နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ် ကိုယ်တာလက်ကျန် အသေးစိတ်ကိုသိရန် အပေါ်သို့ ရွှေ့ပါ။
*118*2*3# သို့ ခေါ်ပါ
28118 သို့ <MBDay>ဟု ပို့ပါ
နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသလား?
ရပါတယ်၊ MB-Day အစီအစဉ်ကို ရပ်နိုင်ပါတယ်။ ရပ်ဆိုင်းရန် *118*2*4# သို့ ခေါ်ပါ။ အတည်ပြုပြီးပါက သင့်အစီအစဉ်ကို ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပါမည်။
အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆိုနိုင်ပြီး သင့်အစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်သွားပါက ဖယ်ရှားပါမည်။ အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်းကို ရပ်ရန် *118*2*5# သို့ ခေါ်ပါ။
ကျွန်ုပ်အကောင့် သက်တမ်းကုန်နေပါက MB ဒေတာ အစီအစဉ်များကို ရယူနိုင်ပါသလား?
MB ဒေတာ အစီအစဉ်များ ရယူရန် သင့်အကောင့်သည် သက်တမ်းရှိနေရပါမည်။
သက်တမ်းကုန် ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်၏ နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်ကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူပါမည်လား?
မဟုတ်ပါ၊ သက်တမ်းကုန် ကာလအတွင်း သင့်အစီအစဉ်ကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မယူပါ။
အသစ် Unlimited Funz Plan ကို မည်သူတို့အတွက် လျှောက်ထားနိုင်သနည်း?
25 ဇူလိုင် 2019 မှ စတင်ပြီး U Mobile ငွေကြိုပေးသုံးစွဲသူ အသစ်များ အားလုံးကို ယခု အစီအစဉ်သစ်သို့ အလိုအလျောက် စတင်သွားပါမည်။
လက်ရှိအစီအစဉ် (Unlimited Power, Power Prepaid, New U Prepaid သို့မဟုတ် U Prepaid အစီအစဉ်) သုံးနေသူများသည် အသစ် Unlimited Funz Plan သို့ ပြောင်းလိုပါက UMB မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Unlimited Funz Pack တွင် ဘာတွေပါသနည်း?
Unlimited Funz Pack တွင် အောက်ပါတို့ ကြိုတင်ထည့်ပေးထားပါသည်-
အခမဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် 200MB
5 ရက် သက်တမ်း
သင့်အကောင့်ထဲမှ RM1 သုံးပြီးပါက ထိုနေ့အတွက် လိုင်းတူဖုန်းခေါ်မှု မှန်သမျှ အခမဲ့
အခမဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် 200MB ကို မည်သို့ ရယူမည်နည်း?
Unlimited Funz Plan ကို စတင်သုံးသည်နှင့် အခမဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် 200MB ကို အလိုအလျောက် ထည့်ပေးပါမည်။ ၎င်းသည်5ရက် သက်တမ်း ရှိပါသည်။
အခမဲ့ လိုင်းတူခေါ်ခြင်းကို မည်သို့ ရယူမည်နည်း?
Unlimited Funz Plan ကို စတင်သုံးသည်နှင့် သင်သည် ထိုနေ့အတွက် RM1 ဖိုး သုံးပြီးသည့်နောက်တွင် အခမဲ့ U Mobile – U Mobile ခေါ်ဆိုမှုများကို ရရှိပါမည်။
အထူးအစီအစဉ် တစ်ခုထံမှ အခမဲ့ ခရက်ဒစ်များကို ရထားပါသည်။ အခမဲ့ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အဆိုပါ အခမဲ့ ခရက်ဒစ်ထဲမှ ဖြတ်တောက်ပါမည်လား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခမဲ့ ခရက်ဒစ်များထဲမှ အခမဲ့ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုအတွက် ဖြတ်တောက်ပါမည်။ သင်သည် အခမဲ့ လိုင်းတူခေါ်မှု အတွက် အကျုံးဝင်ပါက လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှု ကိုယ်တာကို အခြားအထူးအစီအစဉ်များမှ ပေးအပ်ထားသော အခမဲ့မိနစ်များ သို့မဟုတ် ခရက်းစ်များမှ သုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ သင့်တွင် RM0.50 အခမဲ့ ခရက်ဒစ်ကို ငွေဖြည့်အထူးအစီအစဉ်မှ ရထားပါက အခမဲ့ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများကို ထို အခမဲ့ ခရက်ဒစ်ထဲမှ သုံးစွဲပြီးနောက် အခမဲ့ လိုင်းတူ ခေါ်ဆိုမှုများထဲမှ သုံးပါမည်။
Unlimited Funz Plan အတွက် ပြည်တွင်းခေါ်ဆိုခနှင့် SMS နှုန်းများမှာ အဘယ်နည်း?
ပြည်တွင်း ခေါ်ဆိုမှုများအား 15 ဆင့်/30 စက္ကန့် SMS ကို တစ်ကြိမ်လျှင် 12 ဆင့် ကျသင့်ပါသည်။ ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် 30 စက္ကန့်/တစ်ကြိမ် တွက်ချက်ပါသည်။
မည်သို့ သက်တမ်းဝင် နေရမည်နည်း?
သက်တမ်းဝင်နေစေရန် ငွေဖြည့်ပါ။ RM1 ငွေဖြည့်တိုင်း 1 ရက် သက်တမ်းတိုးပါသည်။ တစ်ကြိမ်အတွက် အများဆုံး သက်တမ်းမှာ 365 ရက် ဖြစ်ပါသည်။
Unlimited Funz Plan သက်တမ်းမှာ အဘယ်နည်း?
Unlimited Funz Plan သည်5ရက် သက်တမ်းရှိပြီး သက်တမ်းကုန်ကာလမှာ 60 ရက် ဖြစ်ပါသည်။
အခမဲ့ခေါ်ဆိုခြင်း အထူးအစီအစဉ်သည် ဗီဒီယိုခေါ်ခြင်းအတွက် အကျုံးဝင်ပါသလား?
မဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ခေါ်ဆိုခြင်းသည် ပြည်တွင်းတွင် U Mobile ကွန်ယက် အတွင်း အသံဖုန်း ခေါ်ဆိုမှုအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပါသလား? ‘မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများ’ စာရင်း လိုအပ်ပါသလား?
မလိုအပ်ပါ၊ မည်သည့် U Mobile နံပါတ်သို့မဆို ခေါ်နိုင်ပါသည်။
Giler အကန့်အသတ်မဲ့ ငွေကြိုပေး သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများ ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ Unlimited Funz Prepaid Plan စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
Giler အကန့်အသတ်မဲ့ ငွေကြိုပေး သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများ
GX12 နှင့် GX30 ဆိုပြီး Giler အကန့်အသတ်မဲ့ ငွေကြိုပေး အစီအစဉ်များ (2) မျိုး ရှိပါတယ် (နှစ်ခုပေါင်းကို “အစီအစဉ်များ” ဟု ခေါ်ပြီး တစ်ခုချင်းကို “အစီအစဉ်” ဟု ခေါ်ပါသည်)။ အောက်ပါဇယားတွင် အစီအစဉ်များ၏ အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
အစီအစဉ် တန်ဖိုး အင်တာနက်ကိုယ်တာ ဖုန်းကိုယ်တာ သက်တမ်း အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်စ
GX12 RM12 အကန့်အသတ်မဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့7ရက် ဟုတ်ပါသည်
GX30 RM30 အကန့်အသတ်မဲ့ အကျုံးမဝင် 30 ရက် ဟုတ်ပါသည်
အစီအစသ်များကို U Mobile ငွေကြိုးပေး သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရနိုင်ပြီး U Broadband သုံးသူးများအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။
အစီအစဉ်များကို အခြားမိုဘိုင်းနံပါတ်သို့ မလွှဲပြောင်းနိုင်ပါ။
အစီအစဉ် တစ်ခုချင်းစီကို U Mobile ငွေကြိုပေး သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများအတိုင်း စီစဉ်ထားပါသည်။ သင်သည် မျှတစွာသုံးခြင်း မူဝါဒ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒနှင့် အဆိုပါ နောက်ထပ် သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းများ (စုပေါင်းပြီး “သတ်မှတ်ချက်များ” ဟု ခေါ်ပါသည်) ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသတ်မှတ်ချက် အားလုံးကို www.u.com.my တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် နှုန်းထားများ အပါအဝင် အစီအစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ယခုသတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခွင့် ရှိပါသည်။
အစီအစဉ်များကို သီးခြားဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါက ပေါင်းစဥည်းမှု မပြုနိုင်ပါ။
သင့်ဖုန်းတွင် အစီအစသ် တစ်ခုစီကို စတင်သုံးနိုင်ပါသည်-
MyUMobile App ၏ Add-on မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ်
*118# သို့ ခေါ်ပြီး၊ သို့မဟုတ်
28118 သို့ အောက်ပါ စာသားများကို SMS ပို့ပြီး-
SMS တစ်စောင်ပို့လျှင် RM0.05 ကျသင့်ပါမည်။
စတင်သုံးခြင်း မပြုမီနှင့် သင့်လျှောက်ထားမှုကို အသစ်ပြန်မလုပ်မီ သင့်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အလိုက် အနည်းဆုံး ခရစ်ဒစ်လက်ကျန် ရှိနေရပါမည်-
အစီအစဉ် အနည်းဆုံး ခရက်ဒစ် လက်ကျန်
အစီအစဉ်များအလိုက် ကျင်သင့်သော စတင်အသုံးပြုခမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
စတင်အသုံးပြုခြင်းအား သင်မှသိရှိခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ သင်လျှောက်ထားသော အစီအစဉ်ကိုလိုက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စတင်အသုံးပြုကြေးကို သင့်ခရက်ဒစ်လက်ကျန်ထဲမှ ဖြတ်တောက်ပါမည်။ ခရက်ဒစ် ပြန်လည်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို ခွင့်မပြုပါ။
သက်တမ်းမှာ စတင်အသုံးပြုသည်မှ7ရက် (GX12 အတွက်) နှင့် 30 ရက် (GX30 အတွက်) ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သင့်တွင် စာပိုဒ်2(စတင်သုံးခြင်းနှင့် နှုန်းထားများ) တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ အနည်းဆုံး ခရက်ဒစ်လက်ကျန် ရှိမှသာ သင့်လျှောက်ထားမှုကို အလိုအလျောက် ဆက်သွားပါမည်။
သင့်တွင် ငွေလက်ကျန် မလောက်သဖြင့် သင့်လျှောက်ထားမှုကို အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မလုပ်နိုင်ပါက သင့်လျှောက်ထားမှုကို အသစ်ပြန်မလုပ်ပါ။
သင့် ဘယ်လောက်များများ သင့်စိတ်တိုင်းကျ စတင်သုံးနိုင်ပါသည်။ မသုံးဖြစ်သော ဒေတာများကို အစီအစဉ် အသစ်ပြန်စချိန်တွင် ဆုံးရှုံးပါမည်။
အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုပါက၊ နှုတ်ထွက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်
UMB မှ *118# သို့မဟုတ်
SMS ဖြင့် “OFF GX12” သို့မဟုတ် “OFF GX30” ကို 28118 သို့ ပို့ပါ။ SMS တစ်စောင်လျှင် RM0.05 ကျသင့်ပါမည်။
အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းသောအခါ မသုံးဖြစ်သော ဒေတာများကို ဆုံးရှုံးပါမည်။ နောက်ထပ် ဒေတာများကို သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြိုပေးအစီအစဉ်၏ နှုန်းထားအလိုက် ကောက်ခံသွားပါမည်။
အစီအစဉ်များကို လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာများနှင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်း 3Mbps အထိ ရရှိပါမည်။ အစီအစဉ်များတွင် အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက် ဗီဒီယိုနှင့် တေးဂီတကို ပုံမှန်အရည်အသွေးဖြင့် ကြည့်ရှုနားဆင်ခြင်း ပါဝင်ပါသည်။
သင့်အား သီးခြား 1GB (GX12 အတွက်) နှင့် 3GB (GX30 အတွက်) ဒတာများကို မိုဘိုင်း ဟော့စပေါ့ဝိုင်ဖိုင်အတွက် ပေးထားပါသည်။ ကိုယ်တာ ကုန်သွားပါက ဒေတာအမြန်နှုန်းကို စီမံမှု ပြုပါမည်။
Hotspot Booster သည် စာပိုဒ်2တင် ဖော်ပြာထးသော လစဉ် ဒေတာကိုယ်တာအပေါ်တွင် အပိုထပ်ဆောင်ပေးထားသော မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ဝိုင်ဖိုင် အတွက် ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ Hotspot Booster အား အစီအစဉ်များဖြင့်သာ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အခြားသော U Mobile ဒေတာ အစီအစဉ်များဖြင့် မရယူနိုင်ပါ။ Hotspot Booster ၏ သက်တမ်းမှာ စတင်လျှောက်ထားသည်မှ3ရက် ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် Hotspot Booster ကို လျှောက်ထားပါက သင်၏ နှုန်းထား သို့မဟုတ် ဒေတာအစီအစဉ်ကို ပြောင်းသောအခါတွင် Hotspot Booster မှ မသုံးဖြစ်သော ကိုယ်တာနှင့် အကျုံးဝင်မှုကို ပြည်လည်အစားမပေးဘဲ ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ နှုန်းထား သို့မဟုတ် ဒေတာအစီအစဉ် အသစ်တွင် ပါလာတော့မည် မဟုတ်ပါ။
Turbo Booster သည် စာပိုဒ် 1 ပါ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို မြှင့်ပေးသော ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ Turbo Booster အား သင့်အစီအစဉ်များဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အခြားသော U Mobile ဒေတာအစီအစဉ်များတွင် မရနိုင်ပါ။ Turbo Booster သက်တမ်းမှာ စတင်သည်မှ 1 ရက် ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားမှုသည် သင်၏ အစီအစဉ်များ လျှောက်ထားမှုအပေါ် အပိုဒေတာ မပေးပါ။ သင်သည် Turbo Booster ကို လျှောက်ထားပြီး သင်၏ နှုန်းထား သို့မဟုတ် ဒေတာအစီအစဉ်ကို ပြောင်းပါက မသုံးဖြစ်သော Turbo Booster မှ မသုံးဖြစ်သော အကျုံးဝင်မှုကို ကို ပြည်လည်အစားမပေးဘဲ ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ နှုန်းထား သို့မဟုတ် ဒေတာအစီအစဉ် အသစ်တွင် ပါလာတော့မည် မဟုတ်ပါ။
သီးသန့် (P2) သုံးခြင်းသည် 64kbps အထိ ဖြစ်ပါသည်။
မိုဘိုင်းမဟုတ်သော ဟော့စပေါ့ အသုံးပြုခြင်းအတွက် အစီအစဉ်များကို စမတ်ဖုန်းမှ တစ်ဆင့်သာ သုံးနိုင်ပြီး MiFi နှင့် USB ဝိုဖိုင်ဖမ်းစက်များ မသုံးနိုင်ပါ။ U Mobile အနေဖြင့် အစီအစဉ်များအတွက် စက်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်ကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
U Mobile သည် သင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟု တွေ့ရပါက အစီအစဉ်များကို သင့်အားကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ရပ်ဆိုင်းခွင့် အပြည့်အဝရှိပါသည်။
ဒေတာဝန်ဆောင်မှုသည် ကွန်ယက်အကန့်အသတ်များနှင့် သုံးသည့်စက်၏ စွမ်းဆောင်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သင်၏ အမှန်တကယ် ဒေါင်းလုပ် အမြန်နှုန်းနှင့် ဒေတာသည် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းလျော့နိုင်ခြင်းတို့သည် မိုဘိုင်းတာဝါမှ အကွာအဝေး၊ မိုဘိုင်းတာဝါတိုင် စွမ်းဆောင်မှု၊ သင်ဒေါင်းလုပ်သည့်ဆိုက်၊ သင့်ဖုန်းအမျိုးအစားနှင့် အရည်အသွေး၊ အင်တာနက် သုံးစွဲသူပမာဏနှင့် ဖြန့်ကျက်နိုင်မှု စသည်တို့ကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
အင်တာနက် လိုင်းမမိပါက ပုံမှန် (ဟေ့စပေါ့မဟုတ်) ဒေတာ အသံးပြုမှုကို သင့် မိုဘိုင်း ဟော့စပေါ့ဒေတာမှ ဖြတ်သွားပါမည်။ သင်မှ ထို ဖြစ်နိုင်ခြေများကို သိရှိကာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိသည်ကို သဘောတူပါသည်။
အသံဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်တွင်းမိုဘိုင်း၊ ပြည်တွင်း ကွန်ယက်နှင့် ကွန်ယက်ပြင်ပ အသုံးပြုမှုများအတွက် အကျုံးဝင်ပြီး ဗီဒီယိုခေါ်ခြင်း၊ MMS, ပည်ပတိုက်ရိုက်ခေါ် (IDD), ပြည်ပတွင်သုံးခြင်း၊ အသံမေးလ် (1311) သို့မဟုတ် အထူးနံပါတ်များ/ ပရီမီယံ နံပါတ်များ (ဥပမာ 1300 / 1500 / 1508 / 1600 / 1700 / 1900 / 103, 800 & 15999) သို့ ခေါ်ခြင်း၊ စင်ကာပူသို့ နယ်စပ်မှခေါ်သည့် 02 နှင့်စသော နံပါတ်များ၊ ဘရူနိုင်းသို့ နယ်စပ်မှခေါ်သည့် 080 နှင့် စသည့်နံပါတ်များ မပါဝင်ပါ။
သင်သည် အသံဝန်ဆောင်မှုအား နေ့စဉ် ပုံမှန် ဖုန်းအသုံးပြုမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သာ သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအတွက် မသုံးနိုင်ပါ။ မျှတစွာသုံးစွဲမှု မူဝါဒအရ၊ အစီအစဉ်အား
ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ အခြားနည်းဖြင့်သုံးခြင်း မပြုရ
တပြိုင်နက် အရေအတွက်များစွာ ခေါ်ခြင်း၊ ကွန်ဖရန့်ခေါ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကောလ်စင်တာ ခေါ်ခြင်း၊ ဖုန်းဖြင့် ဈေးကွက်ဆင်းခြင်း၊ အပလီကေးရှင်းမှလူသို့ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်တိုက်ခေါ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ခေါ်ခြင်း၊ စက်အချင်းချင်းခေါ်ခြင်း မပြုရ
ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ယက်၏ ဖုန်းအသုံးပြုချိန်များကို လက်ကားပြန်ရောင်းခြင်း သို့မဟုတ် SIM တွင် ထည့်ပေးခြင်း မပြုရ
ခေါ်ဆိုမှုများကို လမ်းကြေားလွှဲပေးသည့် စက်၊ ဆောဖ့်ဝဲလ်၊ အပလီကေးရှင်းတွင် မသုံးရ
လိုင်းကို နာရီပေါင်းများစွာ ဖွင့်ထားစေပြီး အခြားသူများ သုံးမရအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် စက်မျိုး တပ်ဆင်ခြင်း မပြုရ
U Mobile မှ စံနှုန်းနှင့်မညီဟု သတ်မှတ်သည့် မည်သည့်အပြုအမူအတွက်မျှ မသုံးရ
သင်သည် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ သင်၏ အစီအစဉ်များကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ပြီး မသုံးရသေးသော ခရက်ဒစ်လက်ကျန်များ ဆုံးရှုံးပါမည်။
ငွေကြိုပေး နေ့စဉ် ဒေတာ အစီအစဉ်များ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
ယခု ဒေတာဝန်ဆောင်မှု (“ဝန်ဆောင်မှု”) ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်းသွင်းလျှောက်လွှာတွင် ဝန်ဆောင်မှု စည်းကမ်းအရ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ သင်သည် အဆိုပါ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှတစွာ သုံးစွဲခြင်း မူဝါဒအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု သတ်မှတ်ချက်များ (စုပေါင်းပြီး “သတ်မှတ်ချက်များ” ဟု ခေါ်ပါမည်) ကို လိုက်နာရပါမည်။
မည်သည့်အချိန် တစ်ချိန်တွင်မဆို သင်သည် ယခု ဝန်ဆောင်မှုကို ဒေတာအစီအစဉ် တစ်ခုအနေနှင့်သာ ရယူနိုင်ပါသည်။
ယခုဝန်ဆောင်မှုသည် ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ 3G/4G ကွန်ယက် ဖြန့်ကျက်ထားသော ဒေသအတွင်း အကျုံးဝင်သော သုံးစွဲသူများအတွက် 3G/4G ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် အင်တာနက်နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပါသည်။ ယခုဝန်ဆောင်မှုသည် ကွန်ယက် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရနိုင်မှု၊ စက်စွမ်းဆောင်ရည်တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 3G/4G ကွန်ယက် မရောက်သော နေရာများတွင် ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး အင်တာနက် မချိတ်နိုင်ပါ။ ကွန်ယက် ရနိုင်မှုကို တွင် www.u.com.my လေ့လာပါ။
သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် လက်တော့ပ်တွင် သုံးနေပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ 3G/4G နှင့် တွဲဖက်နိုင်သော 3G/4G မိုဒမ် လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းတွင် သုံးနေပါက 3G/4G နှင့် တွဲဖက်နိုင်သော ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း လိုအပ်ပါသည်။
ဒေတာအစီအစဉ်ကို စတင်သည်နှင့် ဒေတာကုန်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ သက်တမ်းကုန်သွားသည်ဖြစ်စေ မည်သည်က အရင်လာသည်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက် သုံးသွားပါမည်။ သင့်ဒေတာ အစီအစဉ်ကို မရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါ။ သင့်ဒေတာ အစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်ရက်ကို စတင်အသုံးပြုသည်မှ သတ်မှတ်ပါသည်။
သင့်ဒေတာ အစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်ပါက မသုံးဖြစ်သော ဒေတာများကို ဆက်လက်သယ်သွားနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ပယ်ဖျက်ပါမည်။ သက်တမ်းကုန်ချိန်တွင် သင်မှ ဒေတာအစီအစဉ် မပြောင်းပါက (သုံးစွဲသူမှ အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်ယူခြင်းကို မပယ်ဖျက်ထားပါက) ဆက်လက်သုံးနေသော ဒေတာများအတွက် RM2.0/MB (1MB သုံးတိုင်း သို့မဟုတ် သီးခြားအပိုင်းအတွက် ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းအတွက်) ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ဒေတာအစီအစဉ်ကို ပြောင်းပါက ထိုဒေတာ အစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်သော နှုန်းထားများကို ပေးရပါမည်။
သင့်အစီအစဉ် နှုန်းထားသည် အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာ ဖြစ်ပါက မျှတစွာ သုံးစွဲရေး မူဝါဒကို ဆက်လက်လိုက်နာရန် လိုအပ်ပြီး သင်၏ တစ်လစာ ဒေါင်းလုပ်နှင့် အပ်လုပ်ပမာဏသည် သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာ ပမာဏ သို့မဟုတ် မျှတစွာသုံးစွဲရေး မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော အလားတူ သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်ပါ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်အာင်တာနက်ကို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရက်ဆိုင်းခြင်း တို့ကို ကန့်သတ်မှု၊ မြန်နှုန်းလျော့ချမှု မရှိဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒေတာအသုံးပြုမှုကို KB နှင့် တွက်ပါသည်။ ဒေတာမဟုတ်သော အသုံးပြုမှု (အသံ၊ SMS/MMS, ဗီဒီယိုခေါ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပအင်တာနက်နှင့် ပြည်ပဖုန်းခေါ် ဝန်ဆောင်မှု အပါအဝင် သုံးစွဲမှုများ) ကို ပုံမှန်နှုန်းထားများအတိုင်း သီးခြားကော်ကခံပြီး သင်၏ အစီအစဉ်နှုန်းထားတွင် မပါဝင်ပါ။
သင့်လက်ရှိ ဒေတာအစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်မှသာ သို့မဟုတ် ဒေတာခွင့်ပြုပမာဏ သုံးစွဲကုန်မှသာ ဒေတာ အစီအစဉ်ကို ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ဒေတာ အစီအစဉ် အသစ်၏ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံရပါမည်။
သင့်ဒေတာ အသုံးပြုမှုအတွက် သင့်ဘာသာ ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သင့်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဒေတာ အသုံးပြုမှုပမာဏကို စစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် မီတာများကို ပေးထားပါသည်။ မီတာတွင်ပြထားသော အသုံးပြုမှုသည် ညွှန်ပြချက်သာဖြစ်ပြီး ပကတိပမာဏ မဟုတ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်းသည် သင်သုံးနေသော စက်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ USIm သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသည် သင်၏ စက်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ အာမခံပေးခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
အကောင့်ရယူရန် သင်သည် 18 နှစ် ကျော်ရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှ ရယူသော မည်သည့် အင်တာနက် အကြောင်းအရာအတွက်မျှ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ယခုဝန်ဆောင်မှုအတွက် အသုံးပြုသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် လိုင်စင်ရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်ရောင်းချခြင်း၊ မျှဝေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်ဦးဦးသို့ ဖြန့်ချီခြင်း မပြုရပါ။
သင်သည် သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာခြင်း ရှိ မရှိ ကျွန်ုပ်တို့မှ စောင့်ကြည့်ပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို လွဲမှားသုံးခြင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါမည်။ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို တလွဲသုံးကြောင်း တွေ့ရပါက ရလာဒ်အပေါ်မူတည်ပြီး သင်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးစားရိတ်နှင့် အခြားအသုံးပြုသူသို့ ပေးရသည့် နစ်နားကြေးတို့အတွက် သင့်ထံမှ တောင်းခံပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုန်းထားများအပါအဝင် သတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ခွင့် ရှိပါသည်။
သီးခြား ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါက ယခုအစီအစဉ်ကို အခြားအစီအစဉ်များနှင့် မပေါင်းနိုင်ပါ။
ယခုအစီအစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ရပ်ဆိုင်းချိန်အထိ ရယူနိုင်ပါသည်။
Unlimited Funz Prepaid Plan စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
ယခု Unlimited Funz ငွေကြိုပေး အစီအစဉ် (“အစီအစဉ်”) အထူးအရောင်း (“Promotion”) သည် 25 ဇူလိုင် 2019 (“စတင် သက်ရောက်သည့်နေ့”) မှ စတင်ပြီး U Mobile မှ အဆုံးသတ်သည့်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်အား U Mobile ငွေကြိုပေး စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြခက်၊ မျှတစွာသုံးစွဲရေး မူဝါဒ၊ ကိုယ်ရေးအသိပေးချက်နှင့် ယခု စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ အပါအဝင် အဆိုပါ စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ (စုပေါင်းပြီး “သတ်မှတ်ချက်များ” ဟုခေါ်သည်) ကို လိုက်နာရပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုသတ်မှတ်ချက်များကို သင့်အား အသိမပေးဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း ပြုခွင့်ရှိပါသည်။ ၎င်းက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင့်အကြား သဘောတူညီမှု၏ အခြားအပိုင်းများတွင်ပါသော သင့်ကို အသိပေးရန် လိုအပ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ပါသည်။
လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုအတွက် နေ့စဉ် အများဆုံးနှုန်းထားမှာ RM1.00 ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် အားလုံးသော လိုင်းတူ ခေါ်ဆိုမှုများကို ထိုနေ့အတွက် အခမဲ့ သတ်မှတ်ပါသည် (“အခမဲ့ ခေါ်ဆိုမှုများ”)။ သင်သည် အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ ကာလအတွင်း လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှု ပြုပါက သင်၏ အသုံးပြုမှုကို 30 စက္ကန့်အပေါ်တွင် မူတည်သတ်မှတ်ပါသည်။ “လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများ” ဆိုသည်မှာ -
မလေးရှားအတွင် U Mobile လိုင်းတူချင်းသာ ခေါ်ဆိုခြင်း
အခြားမည်သည့် လိုင်းကိုမှ ခေါ်ဆိုခြင်း မပြုရပါ၊
ဗီဒီယိုခေါ်ခြင်း၊ IDD, နိုင်ငံတကာတွင် သုံးခြင်း၊ အသံမေးလ် (1311) သို့မဟုတ် အထူးနံပါတ်များ/ ပရီမီယံနံပါတ်များ မပါဝင်ပါ။ ထိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အောက်ပါနှုန်းထားများ ကျသင့်ပါမည်-
i. အသံမေးလ် ခေါ်ဆိုမှုတစ်ကြိမ်လျှင် RM0.18
ii. ပြည်ပတွင်သုံးနေစဉ် ခေါ်ဆိုမှု လက်ရှိ U Mobile ပြည်ပ အော်ပရေတာများ၏ နှုန်းထားများအပေါ် မူတည်သည်
iii. 1300 RM0.30/ မိနစ်
iv. 1-600-85-8888 (AirAsia) RM1.95/မိနစ်
v. 1800 အခမဲ့
အထက်ပါစာရင်းတွင် မပါဝင်သော အထူး/ ပရီမီယံ နံပါတ်များသို့ ခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် လက်ခံသူမှ သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားများအတိုင်း ကျသင့်ပါမည်။ ခေါ်ဆိုမှုများ မပြုမီတွင် လက်ခံသူတို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော နှုန်းထားများကို လေ့လာရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
အစီအစဉ်သက်တမ်းသည် သုံးစွဲကာလ5ရက် (“သုံးစွဲကာလ”) နှင့် သက်တမ်းကုန်ကလာ 60 ရက် (“သက်တမ်းကုန်ကာလ”) ဖစ်ပါသည်-
သက်တမ်းကုန်ကာလတွင် အင်တာနက်၊ ဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့် SMS အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများကို မသုံးနိုင်ပါ၊ သို့သော် အဝင်ဖုန်းနှင့် SMS ကိုမူ လက်ခံနိုင်ပါသည်၊
သက်တမ်းကုန်ကာလအတွင်း ငွေထပ်ဖြည့်ခြင်း မပြုပါက နောက်ထပ် သတိပေးမှု မပြုဘဲ သင့်အကောင့်သည် အလိုအလျောက် ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်သည်၊
သင်၏ သုံးစွဲကာလ သက်တမ်းသည် သင်ငွေဖြည့်သည့် ပမာဏအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ-
စတင်သုံးစွဲချိန်တွင် နောက်ထပ် ငွေထပ်ဖြည့်ထားခြင်း မရှိပါက သင်၏ သုံးစွဲကာလသည်5ရက် ဖြစ်ပါသည်၊
အချိန်မရွေး RM1.00 ငွေဖြည့်တိုင်း သုံးစွဲကာလကို 1 ရက် တိုးသွားပါမည်။ သို့သော်-
အစီအစဉ် စတင်သုံးပြီးနောက် သင် RM1.00 ငွေဖြည့်ပါက လက်ရှိ အစီအစဉ်၏ သုံးစွဲကာလ၊ ဆိုလိုသည်မှာ5ရက် သက်ရောက်ပါမည် (ပိုမိုကြာရှည်သော သုံးစွဲကာလ)၊
သင်သည် RM10.00 ငွေဖြည့်ပါက သုံးစွဲကာလသည် 10 ရက် ဖြစ်မည်။
အထူးအစီအစဉ်အောက်ရှိ ခံစားခွင့်အားလုံးကို ရယူရန် သင်သည် အစီအစဉ်ကာလတစ်လျောက် အသုံးပြုနေရပါမည်။ အသုံးပြုသည် ဆိုခြင်းမှာ ဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့် ဖုန်းလက်ခံခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သီးခြား ဖော်ပြမထားပါက ယခုအထူးအစီအစဉ်ကို အခြားအစီအစဉ်များနှင့် မပေါင်းနိုင်ပါ။
B. U Mobile မှ U Mobile သို့ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ခြင်း
သုံးစွဲကာလ အတွင်းတွင် တစ်နေ့အတွင်း ပြုလုပ်သော လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများအတွက် သင်၏ ပင်မ ခရက်ဒစ်လက်ကျန်မှ RM1.00 ဖြတ်ပြီးပါက ထိုနေ့အတွက် အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုအတွက် RM1.00 ကောက်ခံမှုအား ထိုနေ့၏ 0:00:01 မှ 11:59:59 နာရီအတွင်း ပြုလုပ်ပါမည်။
လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများကို RM1.00 ထက် လျော့ပြီး သုံးသောနေ့များတွင် လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှု အားလုံးကို ဖုန်းခေါ်နှုန်းများအတိုင်း ကောက်ခံပါမည်။
သင်သည် အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အကျုံးဝင်ပြီး အခြားအထူးအစီအစဉ်များမှ အခမဲ့ မိနစ်များ သို့မဟုတ် ဖုန်းခရက်ဒစ်များ ရှိပါက၊ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှု ကိုယ်တာအတွက် အောက်ပါအတိုင်း သုံးပါမည်-
အခြား အထူးအစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုမှ ပေးသော အခမဲ့ မိနစ်များ သို့မဟုတ် ဖုန်းခရက်ဒစ်၊
သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ငွေဖြည့်အထူးအစီအစဉ် တစ်ခုခုမှ RM0.50 ခရက်ဒစ်လက်ကျန် ရှိပါက သင်၏ လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အခမဲ့ခရက်ဒစ်များထဲမှ ဦးစွာဖြတ်တောက်ပြီးနောက် အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများကို သုံးပါမည်။
အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအား အခြားလူတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ငွေကြိုပေးအကောင့်သို့ မလွှဲပြောင်းနိုင်ပါ။
မသုံးဖြစ်သော အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများကို ဆက်လက်သယ်သွားလို့ မရပါ။ အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများကို နေ့စဉ် 00:00:00 တွင် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် နောက်တစ်နေ့တွင် လိုင်းတူခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အကောင့်ထဲမှ RM1.00 ဖတ်တောက်ပြီးပါက အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများကို ရယူနိုင်ပါသည်။
C. အစီအစဉ်များ ပြောင်းခြင်း
လက်ရှိ U Mobile သုံးသူများအား သက်ရောက်နေ့မှ စတင်ပြီး အစီအစဉ်ပြောင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။
ပြောင်းလဲမှု အထမြောက်ပါက ပြောင်းခ RM3.00 ကို သင့်အကောင့်ထဲမှ ဖြတ်ပါမည်။
သို့သော် သင်သည် အစီအစဉ် ပြောင်းပြီးပါက သင့်ကို Unlimited Power ငွေကြိုပီး အစီအစဉ်သို့သာ ပြန်ပြောင်းခွင့် ပြုပါသည်။
သက်တမ်းကုန်ကာလတွင် အစီအစဉ်များ ပြောင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ အစီအစဉ်များ မပြောင်းမီတွင် သင့်အကောင့်ကို ပြန်လည်စတင်ရန် ငွေပြန်ဖြည့်ပါ။
အစီအစဉ်ပြောင်းခြင်း အောင်မြင်ပါက သင့်အကောင့်ထဲရှိ ခရက်ဒစ်လက်ကျန်ကို ဆက်လက်သယ်သွားမည် ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိရနေသော အခမဲ့များ သို့မဟုတ် ခံစားခွင့်များကို ရုပ်သိမ်းသွားပါမည်။
အောင်မြင်စွာ ပြောင်းပြီးသွားပါက မည်သည့်ငွေကြိုပေး အစီအစဉ်မှ သင်ပြောင်းလာသည်ဖြစ်စေ အကောင့်၏ သုံးစွဲကာလကို5ရက် သို့ သတ်မှတ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ကာလကို 60 ရက်သို့ သက်မှတ်ပါမည်။
အခမဲ့အင်တာနက် ရယူရန် သင့်အကောင့်သည် သက်တမ်းရှိနေ ရပါမည်။
ပေးထားသော အခမဲ့အင်တာနက်ကို အခြားလူ၊ သို့မဟုတ် အခြားလျှောက်ထားသူ၏ ငွေကြိုပေးအကောင့် သို့ မလွှဲပြောင်းနိုင်ပါ။
အခမဲ့အင်တာနက်၏ မသုံးဖြစ်သော ကိုယ်တာကို ဆက်သယ်မသွားပါ။
အခမဲ့အင်တာနက်ကို ပြည်တွင်း (မလေးရှား အတွင်းသာ) သုံးနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားတွင် မသုံးနိုင်ပါ။ သင်၏ နိုင်ငံခြားတွင် အင်တာနက်သုံးခြင်းအတွက် U Mobile ၏ ပြည်ပ အော်ပရေတာများမှ ကောက်ခံနှုန်းအတိုင်း ကျသင့်ပါမည်။
အင်တာနက် သုံးစွဲမှုသည် U Mobile ၏ မျှတစွာသုံးစွဲခြင်း မူဝါဒအရ ဖြစ်ပါသည်။ U Mobile ၏ မျှတစွာသုံးစွဲခြင်း မူဝါဒအရ U Mobile သည် သင်၏ အခမဲ့အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနှင့် အင်တာနက်ကိုယ်တာ အမြန်နှုန်းကို စီမံပြောင်းလဲခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် အပြီးရပ်ဆိုင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
စတင်အသုံးပြုလျှင် ရသော အခမဲ့အင်တာနက်
အစီအစဉ်ကို စတင်အသုံးပြုမှု ပြုလုပ်ပါက အခမဲ့ 200MB မန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်အား သင့်အကောင့်ထဲသို့ ချက်ချင်းထည့်ပေးပါမည်။
အခမဲ့ 200MB အင်တာနက်အား သင့်အကောင့်ထဲ ထည့်ပြီးကြောင်း SMS ပို့ပါမည်။
အခမဲ့ 200MB အင်တာနက်သည် စတင်သည့်နေ့မှ5ရက် သက်တမ်းရှိပါသည်။5ရက်ကာလ ကျော်လွန်ပြီး သက်တမ်းကုန်သွားပါက မသုံးဖြစ်သော ကိုယ်တာများကို ပယ်ဖျက်ပါမည်။
အခမဲ့ 200MB အင်တာနက်အား အခြား U Mobile သုံးစွဲသူများသို့ မလွှဲပြောင်းနိုင်ပါ။
ဆိုရှယ်၊ ချက်တင်နှင့် ဂိမ်း apps 10 ခုအတွက် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာ
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat, IMO, Viber, Facebook Messenger, Mobile Legends နှင့် PUBG (“App နှင့် ဝက်ဘ်”) အတွက် ဒေတာသုံးပါက အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာ (“အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာ”) ကို ရပါမည်။
သင်မှ RM10.00 နှင့် အထက် ငွေဖြည့်လိုက်ပါက အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို သင့်အကောင့်ထဲ ချက်ချင်း ထည့်ပေးပါမည်။
အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာသည်-
App နှင့် ဝက်ဘ်မှ ထောက်ခံထားခြင်းမရှိသော ပြင်ပလင့်ခ်များ၊ စာမျက်နှာများ ရှာဖွေအသုံးပြုခြင်း၊
အင်တာနက် သို့မဟုတ် Apps မှလွဲ၍ အခြားအရာများအတွက် ပါဝင်မှုတို့ အသုံးပြုခွင့်ရရန်အတွက် အသုံးပြုသော မည်သည့်ဒေတာမဆို (ကြော်ငြာများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်စိစစ်သော ကိရိယာများစသည့်)၊
Appနှင့် ဝက်ဘ်ကိုအသုံးပြုပြီး အခြားအဖွဲ့အစည်းဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းများ အသုံးပြုခွင့်ရရှိရန်နှင့်
အကယ်၍ သင်သည် မလေးရှားပြင်ပတွင် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဒေတာအသုံးပြုပါက စံသတ်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်မှာ https://www.u.com.my/plans/roaming-idd/roaming-rates တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
App နှင့် ဝဘ် ဂိမ်းအတွက် သင်သည် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို ဖုန်းဖြင့်သာ သုံးနိုင်ပြီး
MiFi နှင့် USB ဝိုင်ဖိုင်စက်အပါအဝင် အခြားစက်များတွင် မသုံးနိုင်ပါ၊
မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ပြန်မျှဝေခြင်း သို့မဟုတ် ဟော့စပေါ့လွှင့်ခြင်း မသုံးနိုင်ပါ။
U Mobile သည် ၎င်း၏ မူဝါဒများအရ စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို သုံးရန် သင့်အကောင့်သည် သက်တမ်းရှိနေရပါမည်။
အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို အခြား U Mobile သုံးစွဲသူများသို့ မျှဝေခွင့် မရှိပါ။
App နှင့် ဝဘ် ကို သုံးသောအခါ သင်၏ အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကိုသာ အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ စီမံပါမည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အခမဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ ဒေတာကို မသုံးဘဲ App နှင့် ဝဘ် ကို သုံးနေသည့်တိုင်အောင် သင့်ဒေတာကိုယ်တာထဲမှ သုံးနေခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လုပ်ဆောင်ပုံမှားယွင်းခြင်း၊ သီးခြားအဖွဲ့များမှ မှားယွင်းသော IP လိပ်စာကို ခွင့်ပြုခြင်း၊ App နှင့် ဝဘ် စီစဉ်သူမှ ကျွန်ုပ်တို့အား လုံလောက်သော အသိပေးမှု မပြုဘဲ IP လိပ်စာပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝဘ် URL ပြောင်းခြင်း စသည့် နည်းပညာ အခက်အခဲများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့အဖြစ်အပျက်များ ရှိနိုင်ကြောင်းကို သင်မှ သိရှိလက်ခံပြီး ထိုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိကြောင်း သဘောတူပါသည်။
U Mobile တွင် App နှင့် ဝဘ်၊ ထို App နှင့် ဝဘ် တွင် ပါဝင်သော အရာများကို ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း သင်မှ သိရှိလက်ခံပါသည်။ အဆိုပါ App နှင့် ဝဘ် တို့၏ လက်ရှိအဖြစ်အပျက်၊ တိကျမှု၊ အစစ်အမှန်ဖြစ်မှု၊ ရနိုင်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံရေး၊ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများအတွက် U Mobile မှ အာမ မခံကြောင်းနှင့် တာဝန်ရှိမှုကို ငြင်းပယ်ပါသည်။
U Mobile သည် ပုံမှန်အားဖြင့် App နှင့် ဝဘ် များကို စောင့်ကြည့်ခြင်း မပြုသည်ကို သင်မှ သဘောတူပါသည်။ သို့သော် အကျုံးဝင်သော ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမှ တားဆီးရန်အတွက် နည်းပညာအရ ဖြစ်နိုင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် App နှင့် ဝဘ် သုံးစွဲခြင်းကို အချိန်မရွေး တားဆီးခွင့် ရှိပါသည်။
အစီအစဉ်တွင် စတင်အသုံးပြုပါက အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက် ပါဝင်ပါသည်။
သင့်အကောင့် သက်တမ်းရှိနေသရွေ့ အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက်ကို ရနေပါမည်။ သို့သော် သင့်အကောင့် သက်တမ်းကုန်သွားပါက အကောင့် ပြည်လည် သက်တမ်းရှိသည်အထိ အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက်ကို ဆိုင်ငံ့ထားပါမည်။
အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက်ကို မြန်နှုန်း 64kbps အထိနှင့် တစ်လ 1GB အထိ ပေးထားပါသည်။
အခမဲ့ အခြေခံ အင်တာနက်ကို လစဉ် 1 ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်စတင်ပြီး အင်တာနက် ကိုယ်တာအသစ်ကို သင့်အကောင့်ထဲ ထည့်ပေးပါမည်။
ထုတ်ပြန်နေ့စွဲ- 23 ဇူလိုင် 2019